Dala iphrinta ye-3D ngomenzi wekhofi wakudala nebhodi le-Arduino | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala
Bakha iphrinta ye-3D ngomenzi wakudala wekhofi nebhodi le-Arduino
UJoaquin Garcia Cobo | | I-Arduino, Ukuphrinta kwe-3D
Kunamaphrojekthi amaningi ahlobene nokuphrinta kwe-3D, amanye amaningi anamadivayisi asebenza kabusha, kepha awekho amaningi afana nephrojekthi yamanje yeTropical Labs: umenzi wekhofi omdala ozokwazi ukuphrinta izinto ze-3D.
Le phrojekthi iyathakazelisa ngoba isebenzisa amandla imishini yakudala yekhofi okufanele isizakale ngesakhiwo futhi ngokubambisana ne-elektroniki, ukuze ikwazi ukuphrinta izinto ze-3D sengathi iphrinta evela kuphrojekthi yeRepRap.
Iphrojekthi yeTropical Labs iyathakazelisa, ithakazelisa kakhulu ngoba ihlanganisa ukuphinda kusetshenziswe kabusha nokuphrinta kwe-3D. Kepha uma ufuna iphrinta eshibhile ye-3D, khohlwa ngale phrojekthi. Umenzi wekhofi okukhulunywa ngaye ukhipha izingxenye ezenziwe ngokwezifiso nezakhiwo ze-shaft.
Umenzi wekhofi wakudala angaba yiphrinta ye-3D ngenxa yale phrojekthi yokugenca
Kepha uma kuzofanele sisebenzise izinto ezibizayo zephrinta ye-3D, okusho i-electronics kanye ne-extruder. Kulokhu, iphrojekthi isebenzisa ibhodi ye-Arduino MEGA ephelezelwa yiRamps 1.4 electronics. Ngakho-ke ngaphandle kokuthi sibe nomenzi wakudala wekhofi, ngeke kube yiphrojekthi eyonga amaphakethe ethu.
Kunoma yikuphi, iphrojekthi isebenza ngokuphelele futhi singakwazi ukuyikhiqiza kabusha ngokusho kwamaTropical Labs. Singakwazi ukukhiqiza kabusha iphrojekthi ngenxa yokukhishwa kwayo ngo- iwebhu iHadaday, esizothola yonke imininingwane kuwebhusayithi yethu ukuze siyiphinde futhi siyiguqule ngendlela esithanda ngayo.
Into efuna ukwazi kakhulu ngakho konke lokhu ukuthi ngale phrojekthi, imishini yekhofi ibekwe njengabangane abakhulu bakaMenzi nokuphrinta kwe-3D. Njengoba imishini yesimanje yekhofi esebenza ngamaphilisi, ingasisiza njengokondla izinto zokwakha izinto eziphrintiwe nemishini yakudala yekhofi, ngenxa yale phrojekthi, ingasebenza njengamaphrinta e-3D, okungenani ukuqala emhlabeni wokuphrinta kwe-3D noma ukudala izinto eziyisisekelo lokho kuyadingeka kithi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » I-Arduino » Bakha iphrinta ye-3D ngomenzi wakudala wekhofi nebhodi le-Arduino
IProject SideArm noma ungayibamba kanjani i-wing drones engaguquki ngentambo nenetha
Ngalesi sesekeli seLeon3D ungaguqula iphrinta yakho ibe yi-cutter ne-engraver